लोकतन्त्रबादी एकजुट हुनुपर्छ - Aawaj Times
July 10, 2020 July 10, 2020 aawajtimes	0 Comments
बाँके, कुशुममा जन्मेर २०३८ सालमा दाङ भोजपुर स्कुल पढदै गर्दा नेविसंको सदस्यता लिई नेपालगंञ्ज बहुमुखी क्याम्पसमा राजनीतिक शास्त्रमा स्नातक गर्दै गर्दा क्याम्पस समितिमा समेत रहेर २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालगञ्जमा सडक आन्दोलनमा सक्रिय भुमिका निभाएका ओली तत्कालिन कुस्मा गा.वि.स. को पार्टी इकाई सभापति समेत रहेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सशक्त भूमिका खेलेका थिए ।
साथै राजनीतिक र व्यवसायलाई सगै लाने क्रममा २०४९ सालमा दाङ लमहीमा निर्माण र व्यवसाय शुरु गरेका उनले लमही उद्योग बाणिज्य संघ संस्थापक अध्यक्षको रुपमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरी देउखरी उद्योग बाणिज्य संघलाई समेत जन्म दिए ।
व्यापारसंगै राजनीतिलाई समेत अघि बढाएका उनले तक्कालिन चैलाही गा.वि.स बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भई निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को विभिन्न पदमा रही कुशलता पूर्वक संगठन सञ्चालन गर्दै गर्दा तत्कालिन विद्रोही पार्टी माओवादीबाट ठूलो रकम चन्दा नदिएमा ज्यानमार्ने धम्की दिए पश्चात आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको लागि क्यानडामा विस्थापित भई क्यानडालाई कर्मभूमी बनाउदै आएका नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समिति क्यानडाका सभापति बुद्धि प्रकाश ओली नेपाली लोकतान्त्रीक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी द्धन्द्ध एवं २०६२÷६३ को लोकतान्त्रीक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रही लोकतन्त्रको रक्षामा कर्तव्यनिष्ट भएर लागि परे ।
ओलीले ट्रान्सपोर्ट मार्फत क्यानडा र अमेरिकामा सफलतापूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । समाजसेवामा गहिरो रुची राख्ने ओलीले नेपालमा विभिन्न संघ संस्थाहरु मार्फत मानवीय सहायताको क्षेत्रमा सहयोग समेत गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा आवाज टाइम्सका प्रतिनिधिले समसमायीक विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति क्यानडा मेरो नेतृत्वमा सन् २०१३ मा तदर्थ समितिको रुपमा गठन भयो । गठन भएका एक वर्ष पछि क्यानडा सरकारमा दर्ता हुनुका साथै तत्कालिन पार्टी सभापति शुशिल कोइरालाले जनबर्गिय संगठनको रुपमा पार्टिमा औपचारिक मान्यता दिनु भयो ।
त्यसपछि पहिलो अबिधेशनमा पार्टिका केन्द्रिय प्रतिनिधि अर्जुन जोशीको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । त्यसैगरी दोस्रो अबिधेशन गराउन पार्टीले केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्व सिंचाई मन्त्री दिपक गिरीलाई पठायो । उहाँकै अग्रसरतामा हामीले दोस्रो अबिधेशन समेत भव्यताका साथ सम्पन्न ग¥यौं । तदर्थ समिति हुँदै अहिले मैले तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरहेको छु । यद्यपी नेपाली जनसम्पर्क समितिले यहाँसम्मको यात्रामा निकै चुनौतीहरुको सामना गर्नुप¥यो । स्थापना कालदेखी पार्टिकै साथिहरुबाट घात अन्तर्घात सहनुप¥यो । तुल्सी पौडेल लगाएतले छुट्टै जनसम्पर्क समिति दर्ता गरी निर्वाचित समितिलाई अबैधानिक भनि विरोध गरे । पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा उजुरी समेत दिए । त्यसपछि पार्टिले छानवीन गरेर मेरो नेतृत्वको समिति नै बैधानिक भनी १७ भाद्र २०७६ मा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले मान्यता दियो । यद्यपी अझै पनि जनसम्पर्क समिति र कांग्रेसलाई बदनाम गर्न केही गिरोह सक्रिय छ । जस्तोसुकै आरोह अबरोह भए पनि हामी लोकतन्त्र र समाजवादको यात्रामा कटिबद्ध छौं । क्यानडाका सबै प्रदेशमा हाम्रो समितिको संरचना छ । २४ सदस्यिय कार्यसमितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै आएको छ ।
जनसम्पर्क समितिहरुले नेपाली समुदायलाई बिना राजनीतिक भेदभाव सहयोग गर्ने ।
बिदेशमा विपद् पर्दा सबैले सकेको सहयोग गर्ने ।
विभिन्न देशमा रहेका लोकतान्त्रिक जनसम्पर्क समितिहरु बीच अनुभव आदान प्रदान गर्ने । जसले गर्दा एक देशको अनुभव अर्को देशमा उपयोगी हुन सक्छ ।
जनसम्पर्क समितिहरुलाई पार्टी केन्द्रिय कार्यालयबाट समय समयमा प्रशिक्षण गर्नुपर्ने ।
पार्टि कार्यकर्ता पंक्तिमा इमानदारिता एवं सदाचारिताको भावना विकास गर्नुपर्ने ।
विश्वभरीका लोकतन्त्रवादीहरुलाई गोलबन्द गर्न अन्र्तराष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने ।
पार्टि केन्द्रिय कार्यसमिति र जनसम्पर्क समितिहरुमा समेत समयमै अबिधेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने । जसले संगठनलाई गतिशिल बनाउन सहयोग पुग्छ ।
← नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलहरूको प्रसारणमा रोक
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सात दिनका लागि स्थगित →
“हस्पिटलले ज्वरोका विरामी फिर्ता गर्दा हामी संक्रमितको उपचारमा व्यस्त थियौं ।”: डा. पौडेल
November 12, 2020 November 12, 2020 Aawaj Times Reporter 0